နျူကလိယ accumbens အတွက် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြမှုအပေါ် osFosB အလွန်အကျွံဖိအား၏အကျိုးသက်ရောက်မှု (၂၀၁၁) - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ဆန်
Neuropharmacology ။ 2011 Dec;61(8):1470-6. doi: 10.1016/j.neuropharm.2011.08.046.
sim-Selley LJ, Cassidy အမတ်, Sparta တစ်ဦးက, Zachary V ကို, Nestler EJ, Selley DE.
ဆေးဝါးဗေဒနှင့်ဝိသဗေဒနှင့်ဆေးဝါးနှင့်အရက်လေ့လာရေးအင်စတီကျု, ဆေးပညာ၏ဗာဂျီးနီးယားဓနသဟာယတက္ကသိုလ်ကျောင်း, Richmond, VA သို့ 23298, အမေရိကန်နိုင်ငံစီးဌာန။
အဆိုပါတည်ငြိမ်ကူးယူအချက်ΔFosBအလွဲသုံးစားမှုအများအပြားမူးယစ်ဆေးမှနာတာရှည်ထိတွေ့မှုအားဖြင့်နျူကလိယ accumbens (NAc) တွင်သွေးဆောင်သည်နှင့် striatum အတွက်ΔFosB၏ Transgene စကားရပ်မော်ဖင်းအကိုက်နှင့်ကိုကင်းများ၏အကြိုးဂုဏ်သတ္တိများပိုကောင်းစေပါတယ်အီး။ သို့သော်ဤလေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအတွက် mechanistic အခြေခံမလုံလောက်မှု, နားလည်သဘောပေါက်ထားပါသည်။ ကျနော်တို့ΔFosBအတွက်၏သွေးဆောင်စကားရပ်နှင့်အတူတစ်ဦး bitransgenic mouse ကိုမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု dopamine : D (1) အဲဒီ receptor / dynorphin ပါဝင်သော striatal အာရုံခံအဆိုပါ NAc အတွက် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor အချက်ပြအပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်။ ရလဒ်များ adenylyl cyclase ၏ mu opioid-mediated, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့တားစီးΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုကြောင်းကြွက်များ၏ NAc အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့ကြကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အလားတူပင် adenylyl cyclase ၏ Kappa opioid တားစီးသည့်ΔFosBဖော်ပြကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်. ဆနျ့ကငျြ, cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြΔFosB overexpressing ကြွက်နှင့်ထိန်းချုပ်မှုကြွက်အကြားကွာခြားခဲ့ပါဘူး။ These တွေ့ရှိချက်ကြောင့် opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor အချက်ပြအကြံပြု differential ΔFosB၏စကားရပ်အားဖြင့် modulated နှင့်ΔFosBစကားရပ် NAc အတွက်တိုးမြှင့် mu နှင့် Kappa opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြနေတစ်ဆင့်ယင်း၏သက်ရောက်မှုအချို့ကိုထုတ်လုပ်အံ့သောငှါညွှန်ပြနေကြသည်။
keywords: G-ပရိုတိန်း, adenylyl cyclase, striatum
Opioid receptors နှင့် cannabinoid သမဝါယမ1 receptors (CB1R ကို) ကို neurobiological မော်ဖင်းအကိုက်ပါဝင်သည်နှစ်ခုအသုံးများမူးယစ်ဆေးအတန်းများအတွက်ပစ်မှတ်, ဘိန်းဖြူနဲ့ဆေးညွှန်း opioids နှင့်ဆေးခြောက် (များမှာΔ9အသီးသီး -tetrahydrocannabinol (THC)) ။ opioids နှင့် cannabinoids ၏စူးရှသောဆိုးကျိုးများအဓိကအား, G ကိုသက်ဝင်ကြောင်း, G-ပရိုတိန်း-coupled receptors ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်I / O ပရိုတိန်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော adenylyl cyclase ၏တားစီးအဖြစ်မြစ်အောက်ပိုင်း effector တုံ့ပြန်မှုထုတ်လုပ်ရန် (Childers, 1991, Childers, et al ။ , 1992, Howlett, et al ။ , 2002) ။ အဆိုပါမော်တာ, မှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းခြင်းနှင့်Δ၏ psychoactive ဆိုးကျိုးများ9-THC သမဝါယမများကထုတ်လုပ်နေကြပြီး1R ကို (Huestis, et al ။ , 2001, Zimmer, et al ။ , 1999), အရာကျယ်ပြန့်သည့် Basal ganglia, hippocampus နှင့် cerebellum (မြင့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ, ဦးနှောက်ထဲမှာဖြန့်ဝေနေကြသည်Herkenham, et al ။ , 1991) ။ အဆိုပါ analgesic ဆုံးနဲ့ဆေးခန်းကိုသက်ဆိုင်ရာများနှင့်နှိပ်စက် opioid မူးယစ်ဆေးဝါးများ mu opioid receptors (Mor) ကအဓိကအားဖြင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်၏အကြိုးသက်ရောက်မှု (Matthes, et al ။ , 1996), အ limbic စနစ်နှင့် brainstem အတွက်ကြွယ်ဝပြည့်စုံလျက်ရှိသော (Mansour, et al ။ , 1994) ။ accumbens (NAc) nucleus ဖို့ ventral tegmental ဧရိယာ (VTA) မှ dopaminergic စီမံကိန်း၏ရေးစပ်အဆိုပါ mesolimbic စနစ်,, (opioids နှင့် cannabinoids ၏အကြိုးသက်ရောက်မှုအတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍBozarth နှင့်ပညာရှိ, 1984, Vaccarino, et al ။ , 1985, Zangen, et al ။ , 2006), အဖြစ်အလွဲသုံးစားမှုအခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ (Koob နှင့် Volkow, 2010) ။ ထိုမှတပါး, endogenous opioid နှင့် cannabinoid စနစ်များ (psychoactive မူးယစ်ဆေးဝါးမျိုးစုံအတန်း၏အကြိုးသက်ရောက်မှုများတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်Maldonado, et al ။ , 2006, Trigo, et al ။ , 2010) ။ ထို့ကွောငျ့အရာ opioid နှင့်သမဝါယမအားဖြင့်ယန္တယား elucidate ရန်အရေးကြီးပါသည်1R ကိုအချက်ပြသည့် NAc အတွက်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နေကြသည်။
မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုလယ်ပြင်၌တစ်ဦးကဗဟိုဆိုတဲ့မေးခွန်းကို psychoactive မူးယစ်ဆေးရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှစူးရှကနေအကူးအပြောင်းဖျန်ဖြေကြောင့်ပရိုတိန်းကိုသိရှိနိုင်ဖို့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့တစ်တည်ငြိမ်ခြင်းကို splice မူကွဲထုတ်ကုန်ဖြစ်သောကြောင့်အဆိုပါ AP-1 ကူးယူအချက်ΔFosBအထူးသဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါသည် fosb အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှုသို့မဟုတ်သဘာဝကဆုလာဘ် (အပေါ်သို့စုဆောင်းကြောင့်မျိုးရိုးဗီဇMcClung, et al ။ , 2004, Nestler, 2008, Nestler, et al ။ , 1999). ကျနော်တို့Δ, ΔFosBမော်ဖင်းအကိုက်ဖို့အထပ်ထပ်ထိတွေ့မှုကအောက်ပါဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်ကြောင်းတွေ့ကြပြီ9တစ်ခုချင်းစီကိုမူးယစ်ΔFosBစကားရပ်၏တစ်မူထူးခြားသောဒေသဆိုင်ရာပုံစံထုတ်လုပ်အတူ -THC, ကိုကင်းသို့မဟုတ်အီသနော, (Perrotti, et al ။ , 2008) ။ မူးယစ်ဆေးဖြတ်ပြီးတစ်ဦးကတသမတ်တည်းတွေ့ရှိချက်ΔFosBအလွန်အမင်းအားလုံးလေးယောက်မူးယစ်ဆေးဝါး NAc core ကိုနှင့်အားလုံးΔ မှလွဲ. ΔFosBသွေးဆောင်ရှိရာ striatum အတွက်သွေးဆောင်ခဲ့ကွောငျးခဲ့9သိသိသာသာ NAc shell ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုသွေးဆောင်ခြင်းနှင့်-putamen caudate -THC ။
Pharmacological လေ့လာမှုများ dopamine: D ၏ Co-အုပ်ချုပ်ရေးပြသ1 အဲဒီ receptor (ဃ1R) ရန် SCH 23390: D များ၏အလားအလာအရေးပါမှုအကြံပြုခြင်း, ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းကိုကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ NAc နှင့် caudate-putamen အတွက်ΔFosBသော induction ပိတ်ဆို့1R-ဖော်ပြအာရုံခံ (Muller နှင့် Unterwald, 2005, Nye, et al ။ , 1995) ။ မူးယစ်ဆေး-mediated အပြုအမူတွေအပေါ်ΔFosBသော induction ၏အကျိုးသက်ရောက်မှု bitransgenic အဆိုပါ NAc ၏တိကျသောအာရုံခံလူဦးရေအတွက်ΔFosBဖော်ပြကြောင်းကြွက်နှင့် dorsal striatum ( အသုံးပြု. စုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိသည်Chen က et al ။ , 1998) ။ dynorphin အတွက်ΔFosBဖော်ပြကြောင်းကြွက် / D ကို1အဆိုပါ NAc နှင့် dorsal striatum အတွက် R ကိုအပြုသဘောအာရုံခံ (လိုင်း 11A) (အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများမှပြောင်းလဲတုံ့ပြန်မှုပြကင်းသို့မဟုတ်မော်ဖင်းအကိုက်၏အကြိုးသက်ရောက်မှုမှအထူးတိုးမြှင့် sensitivity ကိုColby, et al ။ , 2003, Kelz, et al ။ , 1999, Zachary, et al ။ , 2006) ။ ဤရွေ့ကားကိုပြောင်းလဲ Mor ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်ပြောင်းလဲမှုများသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးသော, G-ပရိုတိန်း subunits ၏မရှိခြင်းအတွက်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ သို့သော် dynorphin mRNA အဆင့်ဆင့် (ကြွက်ဖော်ပြΔFosB၏ NAc အတွက်လျှော့ချခဲ့သည်Zachary, et al ။ , 2006), ΔFosBများထဲမှပစ်မှတ်တစ်ခု endogenous opioid peptide ကုဒ်သွင်းနေတဲ့မျိုးဗီဇကြောင်းအကြံပြု။ ΔFosBသော induction ကိုလည်း NAc အတွက်အဲဒီ receptor အချက်ပြထိန်းညှိခြင်းဖြင့်အပြုအမူအပြောင်းအလဲများထုတ်လုပ်မယ်, ဒါပေမယ့်ဒီဖြစ်နိုင်ခြေစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။ ထို့ကြောင့်လက်ရှိလေ့လာမှုများ / D ကို dynorphin အတွက်ΔFosB၏ရှိမရှိ overexpression ဆုံးဖြတ်ရန်ဖို့ bitransgenic mouse ကိုမော်ဒယ်ကိုအသုံးပြု1striatal အာရုံခံ် R ကို Mor-mediated, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှုပွောငျးလဲနှင့် NAc အတွက် MOR- နှင့် KOR-mediated adenylyl cyclase တားစီး။ သမဝါယမအပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှု1R ကို-mediated, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှုကိုလည်းΔဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အကဲဖြတ်ခဲ့သည်9-THC အုပ်ချုပ်ရေးကို (NAc အတွက်ΔFosB inducesPerrotti, et al ။ , 2008) နှင့် endocannabinoid system ကိုဦးနှောက်ဆုလာဘ်ဆားကစ်ကိုထိန်းညှိဖို့လူသိများသည် (Gardner, 2005, Maldonado, et al ။ , 2006), ဒါပေမယ့် endocannabinoid system ပေါ်တွင်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
2.1 ။ ဓါတ်ကူပစ္စည်း
[35S က] GTPγS (1250 Ci / mmol), [α-32: P] ATP (800 Ci / mmol) နှင့် [3H ကို] စခန်း (26.4 Ci / mmol) PerkinElmer (Shelton, မှန် CT) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ ATP, GTP, ဂျီဒီပီ, စခန်း, bovine သွေးရည်ကြည် albumin, Creatine သည် phosphokinase, papaverine, imidazole နှင့် WIN-55212-2, Sigma Aldrich (စိန့်လူးဝစ်, MO ကို) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ GTPγS Roche Diagnostic ကော်ပိုရေးရှင်း (ချီကာဂို, IL) မှဝယ်ယူခဲ့သည်။ DAMGO မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု (Rockville, MD) ၏ဆေးဝါးထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်အားဖြင့်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သညျ။ Econo-1 scintillation အရည် Fisher ကသိပ္ပံ (Norcross, ဂျော်ဂျီယာ) မှရရှိသောခဲ့သည်။ Ecolite scintillation အရည် ICN (ကော့စ Mesa,, CA) မှရရှိသောခဲ့သည်။ အားလုံးသည်အခြားဓာတုပစ္စည်းများ Sigma Aldrich သို့မဟုတ် Fisher ကသိပ္ပံမှရရှိသောခဲ့ကြသည်။
2.2 ။ ကြွက်
TetOp-ΔFosB× NSE-tTA (လိုင်းတစ်ဦး) (line ကို 11) မှဆင်းသက်လာအထီး bitransgenic ကြွက် Kelz et မှာဖော်ပြထားတဲ့အယ်လ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ (Kelz, et al ။ , 1999) ။ Bitransgenic ကြွက် Transgene စကားရပ်နှိမ်နင်းရန် (သောက်ရေအတွက် 100 μg) doxycycline အပေါ်ပဋိသန္ဓေနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်။ ကျန်ရှိသောကြွက်တွေဟာ Transgene နှိမ်နင်းရန် doxycycline အပေါ်ထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရသော်လည်းအသက် 8 ရက်သတ္တပတ်မှာ doxycycline, Transgene စကားရပ်ခွင့်ပြုပါရန်ကြွက်၏ထက်ဝက်အဘို့အရေမှချန်လှပ်ခံခဲ့ရသည်။ ဦးနှောက်, 8 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်ΔFosB၏မှတ်တမ်းသက်ရောက်မှု (အကျယ်ချဲ့နေသောမှာအချိန်စုဆောင်းခဲ့ကြMcClung နှင့် Nestler, 2003) ။ တစ်ဦးကစက္ကန့် Transgene mouse ကိုလိုင်းΔc-ဇွန်, က c-ဇွန်တစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ်ရန်, D ကိုဖျောပွသောများတွင်အသုံးပြုခဲ့သည်1R ကို / dynorphin နဲ့ D2အဆိုပါ striatum, hippocampus နှင့် parietal cortex ၏ R ကို / enkephalin ဆဲလ် (Peakman, et al ။ , 2003) ။ ကို C-ဇွန်လနှင့်ဆက်စပ်ဇွန်မိသားစုပရိုတိန်းကူးယူထိန်းညှိရန်ပစ်မှတ်မျိုးဗီဇ၏ AP-1 site ကိုမှ Fos မိသားစုပရိုတိန်းနှင့်ချည်နှင့်အတူ dimerize ။ သို့သော်က c-ဇွန်လ (Δc-ဇွန်) ၏ N-terminus ၏ခြင်းကိုရှုပ်ထွေး transcriptionally မလှုပ်မရှားခြင်းနှင့်တက်ကြွ AP-1 ရှုပ်ထွေးသော၏စညျးပု DNA ကိုပိတ်ဆို့နိုင်ဖြစ်ရသည်။ TetOp-အလံ-Δc-ဇွန်လ (လိုင်း E) ကို× NSE-tTA (လိုင်းတစ်ဦး) မှဆင်းသက်လာအထီး bitransgenic ကြွက် Peakman et မှာဖော်ပြထားတဲ့အယ်လ်အဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးခဲ့ကြသည်။ (Peakman, et al ။ , 2003) ။ Bitransgenic ကြွက် Transgene စကားရပ်နှိမ်နင်းရန် (သောက်ရေအတွက် 100 μg) doxycycline အပေါ်ပဋိသန္ဓေနှင့်ကြီးပြင်းလာခဲ့ကြသည်။ ဝက်အလံ-Δc-ဇွန်စကားရပ်သွေးဆောင်ဖို့ပုံမှန်သောက်သုံးရေအပေါ် doxycycline ပါဝင်သောရေနှင့်တစ်ဝက်အပေါ်ထိန်းသိမ်းထားနှင့်အတူခွေးများ,3ရက်သတ္တပတ်မှာနို့ genotyped နှင့်အုပ်စုများသို့ကွဲကွာခဲ့သည်။ ဦးနှောက် (6 ရက်သတ္တပတ်အကြာတွင်အလံ-Δc-ဇွန်၏အလုပျသအဆင့်ဆင့်တိုင်းတာခဲ့ကြရာမှာအချိန်စုဆောင်းခဲ့ကြPeakman, et al ။ , 2003) ။ အားလုံးတိရစ္ဆာန်အလုပျထုံးလုပျနညျးဓာတ်ခွဲခန်းတိရစ္ဆာန်များ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်အသုံးပြုမှုများအတွက်ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန်အမျိုးသား Institutes နှင့်အညီကောက်ယူခဲ့ကြသည်။
2.3 ။ အမြှေးပါးအဘိတ်
ဦးနှောက်ဟာ assay နေ့ရက်တိုင်အောင် -80 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာသိမ်းဆည်းထားခဲ့ကြသည်။ assay မတိုင်မီကတစ်ဦးချင်းစီကဦးနှောက် thawed ခဲ့သည်, ထို NAc ရေခဲပေါ်ခွဲဖြာခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာ 50 MM Tris-HCl,3MM MgCl အတွက် homogenized ခဲ့သည်2, 1 MM EGTA, 7.4 နှင့်အတူသော pH 20 (အမြှေးပါးကြားခံ)4ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာဖန်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းထံမှပှေ့။ အဆိုပါတစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်း 48,000 ×မှာ centrifuged ခဲ့သည် g အမြှေးပါးကြားခံအတွက် resuspended4မိဘို့ 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ, 48,000 ×မှာနောက်တဖန် centrifuged g4မိဘို့ 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 50 MM Tris-HCl,3MM MgCl အတွက် resuspended2, 0.2 MM EGTA, 100 MM NaCl, သော pH 7.4 (assay ကြားခံ) ။ ပရိုတိန်းအဆင့်ဆင့်ဘရက်ဖို့ဒ၏နည်းလမ်းကဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြ (ဘရက်ဖို့ဒ, 1976) ကိုစံအဖြစ် bovine သွေးရည်ကြည် albumin (BSA) ကိုသုံးနိုင်သည်။
2.4 ။ Agonist-stimulation [35binding က S] GTPγS
အမြှေးပါး assay ကြားခံအတွက် adenosine deaminase (10 Mu / ml) နဲ့ 30 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ3မိနစ် Pre-နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်။ အမြှေးပါး (5-10 μgပရိုတိန်း) ထို့နောက် [2% (w / v) BSA, 30 nm်assay ကြားခံအတွက် 0.1 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ 0.1 နာရီများအတွက်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်35S က] GTPγS, 30 μMဂျီဒီပီနှင့် adenosine deaminase (3 Mu / ml) နှင့် DAMGO သို့မဟုတ် WIN55,212-2 ၏သင့်လျော်သောပြင်းအားမရှိဘဲ။ စည်းနှောင် Nonspecific 20 μMGTPγSနှင့်အတူတိုင်းတာခဲ့သည်။ ထိုပေါက်ဖွား3ml ကိုရေခဲ-အအေး3MM Tris-HCl, သော pH 50 နှင့်အတူ 7.4 ဆေးကြောနောက်တော်သို့လိုက် gf / B ကိုဖန်ဖိုင်ဘာ filter များ, မှတစ်ဆင့် filtration အားဖြင့်ရပ်စဲခံခဲ့ရသည်။ ခညျြနှောငျရေဒီယိုသတ္တုကြွ Econo-1 scintillation အရည်အတွက် filter များ၏နေ့ချင်းညချင်းထုတ်ယူပြီးနောက်အရည် scintillation spectrophotometry ကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
2.5 ။ Adenylyl Cyclase assay
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသကဲ့သို့အမြှေးပါး (5-25 μgပရိုတိန်း) ပါဝင်တဲ့ assay ကြားခံအတွက် DAMGO, U15H သို့မဟုတ် WIN30-1 နှင့်အတူသို့မဟုတ်မပါဘဲ, 50,488μM forskolin ၏ရှေ့မှောက်တွင်သို့မဟုတ်မရှိခြင်းအတွက် 55,212 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မှာ2မိဘို့နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးထို့နောက် adenosine deaminase နှင့်အတူ preincubated ခဲ့ကြသည် 50 μM ATP [α-32: P] ATP (1.5 μCi), 0.2 MM DTT, 0.1% (w / v) BSA, 50 μMသိသိ amp, 50 μM GTP, 0.2 MM papaverine,5MM phosphocreatine, 20 ယူနစ် / ml Creatine သည် phosphokinase နှင့် adenosine deaminase (3 Mu / ml) 100 μl၏နောက်ဆုံး volume ထဲမှာ။ ဤအခြေအနေများအောက်တွင်, စုစုပေါင်း [α-32: P] စခန်းပြန်လည်ကောင်းမွန်ယေဘုယျအားဖြင့် added ၏စုစုပေါင်းပမာဏ၏ 1% ထက်လျော့နည်း [α-ခဲ့သည်32တစ်ခုချင်းစီကိုနမူနာအတွက် P ကို] ATP ။ အဆိုပါတုံ့ပြန်မှု3မိခြင်းနှင့် [များအတွက်ဆူပွက်နေဖြင့်ရပ်စဲခဲ့သည်32: P] သိသိ amp အဆိုပါ dual-ကော်လံ (Dowex နှင့် alumina) ကအထီးကျန်ခဲ့သည်ဆော်လမွန်၏နည်းလမ်း (ဆော်လမွန်, 1979) ။ [3H ကို] စခန်း (10,000 dpm) မတိုင်မီကာပြည်တွင်းရေးစံအဖြစ်ကော်လံ Chromatography စီပြွန်မှထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရေဒီယိုသတ္တုကြွဘို့အရည် scintillation spectrophotometry (45% ထိရောက်မှုကဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် 3H ကို) ကို eluate ၏ 4.5 ml ပြီးနောက် Ecolite scintillation အရည် 14.5 ml အတွက်ဖျက်သိမ်းခံခဲ့ရသည်။
2.6 ။ ဒေတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
မဟုတ်ရင်ညွှန်ပြမဟုတ်လျှင်, ဒေတာ triplicate အတွက်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်တစ်ဦးချင်းစီ၏အရှေ့တောင် 4-8 ၏သီးခြားစမ်းသပ်မှုတွေ, ±ယုတ်တန်ဖိုးများအဖြစ်အစီရင်ခံရသည်။ net-နှိုးဆွ [35S က] GTPγS binding binding agonist-နှိုးဆွ binding အနုတ် Basal အဖြစ်တွက်ချက်သည်။ Basal လှုပ်ရှားမှု (pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ်) - net forskolin-နှိုးဆွ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု forskolin-stimulation လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသည်။ forskolin-နှိုးဆွ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုရာခိုင်နှုန်းကိုတားစီးအဖြစ်သတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ် (agonist ၏မရှိခြင်းအတွက်အသားတင် forskolin-stimulation လှုပ်ရှားမှု - agonist ၏မရှိခြင်းအတွက် agonist / အသားတင် forskolin-stimulation လှုပ်ရှားမှု၏မျက်မှောက်၌ပိုက်ကွန်ကို forskolin-stimulation လှုပ်ရှားမှု) 100 ×။ အားလုံးကွေး-လျောက်ပတ်နှင့်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း Prism ကို 4.0c (GraphPad Software များ, Inc, San Diego မှ,, CA) ကို အသုံးပြု. ဖျော်ဖြေခဲ့ကြသည်။ အာရုံစူးစိုက်မှု-effect ကိုခါးဆစ် EC ရရှိရန်ကြားမှာ Non-linear ဆုတ်ယုတ်ခြင်းဖြင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့သည်50 များနှင့် Emax ကို တန်ဖိုးများ။ အဆိုပါအာရုံစူးစိုက်မှု-အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကိုအဓိကအချက်များအဖြစ် agonist ထိုးခြင်းနှင့်မျိုးရိုးဗီဇသော induction (သို့မဟုတ်ပိတ်) ကို အသုံးပြု. ကှဲလှဲ၏ Two-လမ်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ (ANOVA) ကဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ကွေး-မထိုက်မတန်တန်ဖိုးစာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို (E ကိုmax ကို သို့မဟုတ် EC50) သည် EC ရှိမတူညီသောကှဲလှဲမှု (F-test မှတွေ့ရှိရသော) အတွက်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်လိုအပ်သောအချက်အလက်များကို Welch ၏အမှားပြင်ခြင်းသို့မဟုတ်စတုရန်းအမြစ်ပြောင်းလဲခြင်းကို အသုံးပြု၍ တွဲဖက်ခြင်းမရှိသော Two-tailed Student's t-test ဖြင့်ဆုံးဖြတ်သည်။50 တန်ဖိုးများ။
3.1 ။ opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated, G-ပရိုတိန်း activation အပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
MOR- သို့မဟုတ်သမဝါယမရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်1R ကို-mediated, G-ပရိုတိန်းတက်ကြွစွာ NAc အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်အားဖြင့်ပြောင်းလဲခဲ့သည်, agonist-နှိုးဆွ [35binding က S] GTPγSတွေနဲ့ (ΔFosBအပေါ်) သို့မဟုတ် (ΔFosBချွတ်) ကိုဖော်ပြမΔFosB Transgene ဖော်ပြ bitransgenic ကြွက်၏ဤဒေသမှကိုပြင်ဆင်အထီးကျန်အမြှေးပါးအတွင်းလေ့လာခဲ့သည်။ အဆိုပါ Mor-ရွေးချယ် enkephalin Analog စ DAMGO Mor သက်ဝင်စေဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်နှင့် WIN55,212-2 aminoalkylindole အဆိုပါ cannabinoid သမဝါယမကိုသက်ဝင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်1R. အဲဒီ ligands ယခင်က Mor နှင့်သမဝါယမမှာအပြည့်အဝ agonists ဖြစ်ပြခဲ့ကြ1အသီးသီး R ကို, (Breivogel, et al ။ , 1998, Selley, et al ။ , 1997) ။ အဆိုပါ signal ကိုကြွက်ဦးနှောက်အတွက်လွန်းအနိမ့်သောကြောင့်ထိုသို့ (KOR-mediated, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှုဆနျးစစျဖို့ဖြစ်နိုင်မဟုတ်ခဲ့Childers, et al ။ , 1998) ။ ရလဒ်များ (ကြွက်အပေါ်ΔFosBချွတ်နှင့်ΔFosBထံမှ NAc အတွက် DAMGO နှင့် WIN55,122-2 နှစ်ဦးစလုံးအားဖြင့် G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှု၏အာရုံစူးစိုက်မှု-မှီခိုဆွပြသပုံ 1) ။ DAMGO-နှိုးဆွလှုပ်ရှားမှုအတွက် (ပုံ 1A), Two- လမ်း ANOVA ၏အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏ osFosB status ကို (p <0.0001, F ကို = 22.12, df = 1) နှင့် DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F ကို = 29.65, df = 5) ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုဖော်ပြခဲ့တယ် သိသာထင်ရှားသောအပြန်အလှန် (p = 0.857, F ကို = 0.387, df = 5) ။ အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုကွေး၏ nonlinear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိသိသာသာသာ။ ကြီးမြတ် DAMGO အီးဖော်ပြခဲ့သည်max ကို ကြွက်အပေါ်ΔFosBအတွက်တန်ဖိုး (E ကိုmax ကို = 73 ± 5.2% ဆွ) ကြွက်ကိုချွတ်ΔFosBမှဆွေမျိုး (E ကိုmax ကို = 56 ± 4.1% ဆွ; p <0.05 သည်ကျောင်းသား၏ t-test ဖြင့်ကြွက်များပေါ်ရှိ osFosB နှင့်ခြားနားသည်။ DAMGO EC50 တန်ဖိုးများ (p = 302 72 ± 212 nm နှိုင်းယှဉ် 56 ±အသီးသီး 0.346 nm) ကြွက်ကိုချွတ်အပေါ်ΔFosBအကြားကွဲပြားခြားနားသောနှင့်ΔFosBကြဘူး။
agonist-နှိုးဆွအပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု [35အဆိုပါ NAc အတွက် binding က S] GTPγS။ ΔFosB-ဖော်ပြ (ΔFosBအပေါ်) သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု (ΔFosBချွတ်) ကွဲပြားပြင်းအားကို အသုံးပြု. နည်းလမ်းများထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက် assayed ခဲ့ကြသည်ထံမှအမြှေးပါး ...
အဆိုပါ Mor agonist DAMGO နှင့်အတူရရှိသောရလဒ်များကိုမှမတူဘဲ G-ပရိုတိန်း activation မΔFosB status ကို-မှီခိုကွဲပြားမှုဟာ cannabinoid agonist WIN55,212-2 (နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်ပုံ 1B) ။ WIN55,212-2 အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏ Two- way ANOVA WIN55,212-2 အာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F = 112.4, df = 7) ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုထင်ရှားပေမယ့်ΔFosB status ကို (p = 0.172) , F = 1.90, df = 1) နှင့်မျှမတို့အပြန်အလှန် (p = 0.930, F ကို = 0.346, df = 7) ရှိ၏။ အလားတူပင်, WIN55,212-2 အီးအပေါ် osFosB status ကိုမအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်max ကို တန်ဖိုးများ (103 ±6အသီးသီးကြွက်အပေါ်နဲ့ off ΔFosBအတွက် 108 ± 8% ဆွနှိုင်းယှဉ်%, ကျောင်းသားရဲ့ t-စမ်းသပ်မှုများက p = 0.813) သို့မဟုတ် EC50 (ကြွက်အပေါ်နဲ့ off ΔFosBအတွက် 103 ± 20 nm နှိုင်းယှဉ် 170 ± 23 nm အသီးသီး, p = 0.123) တန်ဖိုးများ။
အဆိုပါခါးဆစ်၏ပုံသဏ္ဍာန်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှုများဦးနှောက်ထဲမှာ biphasic WIN55,212-2 အာရုံစူးစိုက်မှု-effect ကိုခါးဆစ်ပြသကြပါပြီဆိုတဲ့အချက်ကို (အပေါ် အခြေခံ.Breivogel, et al ။ , 1999, Breivogel, et al ။ , 1998), အ WIN55,212-2 curves ကိုလည်း Two-site ကိုမော်ဒယ်သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပျမ်းမျှအချက်အလက်များ၏ analysis (R ကိုနှစ်ခု-site ကိုမော်ဒယ်ကို အသုံးပြု. မထိုက်မတန်၏ကောင်းမြတ်ခြင်းအတွက်အနည်းငယ်တိုးတက်မှုပြသ2 အဆိုပါ Single-site ကိုမော်ဒယ် (R ကိုနှိုင်းယှဉ်အသီးသီး = 0.933 နှင့် 0.914, ရင်ပြင်၏ပေါင်းလဒ် = ကြွက်အပေါ်နဲ့ off ΔFosBအတွက် 3644 နှင့် 5463,)2 အသီးသီး = 0.891 နှင့် 0.879, ကြွက်အပေါ်နဲ့ off ရင်ပြင်၏ပေါင်းလဒ်ΔFosBအတွက် = 6561 နှင့် 6628,) ။ သို့သျောလညျးအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုအဆိုပါ E ကိုဖြစ်စေများတွင်ကြွက်နှင့်ချွတ်ΔFosBအကြားတွေ့ရှိခဲ့သည်max ကို သို့မဟုတ် EC50 အမြင့်ဆုံးသောသို့မဟုတ်အနိမ့်အာနိသင်က်ဘ်ဆိုက်များ၏တန်ဖိုးများ (နောက်ဆက်တွဲဇယား 1), နိမ့် EC သို့ဦးတည်နေတဲ့လမ်းကြောင်းရှိခဲ့ပါသည်ပေမယ့်50 (EC အပေါ်ΔFosBနှင့်အတူကြွက်တွေ၌မြင့်အာနိသင် site ကိုမှာတနျဖိုး50မြင့်သော = 28.0 ± 10.6 nm) ΔFosBပယ် (EC အရှိသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ50မြင့်သော = 71.5 20.2 nm ±; p = 0.094) ။ ထိုမှတပါး, Basal အပေါ်ΔFosB status ကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက် [ရှိခဲ့35(အသီးသီးကြွက်အပေါ်နဲ့ off ΔFosBအတွက် 253 ± 14 fmol / မီလီဂရမ်နှိုင်းယှဉ် p = 226 14 ± 0.188) NAc အမြှေးပါးအတွင်း binding က S] GTPγS။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုကြွက်များ၏ NAc အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်သိသိသာသာသမဝါယမထိခိုက်ခြင်းမရှိဘဲ Mor-mediated, G-ပရိုတိန်း activation တိုးပွားလာကြောင်းညွှန်ပြ1R ကို-mediated သို့မဟုတ် Basal, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှု။
3.2 ။ adenylyl cyclase ၏ opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated တားစီးပေါ်ΔFosB၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
Mor နှင့်သမဝါယမများကမြစ်အောက်ပိုင်း effector လှုပ်ရှားမှုမော်ဂျူအပေါ်ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအကဲဖြတ်ဖို့1R ကို, 1 μM forskolin-နှိုးဆွ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု၏တားစီး NAc အမြှေးပါးအတွင်းလေ့လာခဲ့သည်။ MOR- နှင့်သမဝါယမအပြင်1adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု R ကို-mediated တားစီး, KOR လှုပ်ရှားမှု၏ဆိုးကျိုးများလည်း KOR-ရွေးချယ်အပြည့်အဝ agonist U50,488 ( အသုံးပြု. လေ့လာခဲ့သည်Zhu, et al ။ , 1997), ယခင်ရလဒ်များက mRNA dynorphin အဆိုပါ bitransgenic မော်ဒယ်အတွက်ΔFosBတစ်ပစ်မှတ် (ဖွစျကွောငျးကိုပြသသောကွောငျ့Zachary, et al ။ , 2006) ။ ရလဒ်များ (ကြွက်အပေါ် DAMGO, U50,488 နှင့် WIN55,212-2 ကြောင်းΔFosBချွတ်နှင့်ΔFosBနှစ်ဦးစလုံးအတွက် adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်လုပ်အာရုံစူးစိုက်မှု-မှီခိုတားစီးပြသပုံ 2) ။ DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု-အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏ two-လမ်း ANOVA (ပုံ 2A) osFosB status ကို (p = 0.0012, F = 11.34, df = 1) နှင့် DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F = 29.61, df = 6) ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုများထင်ရှားသော်လည်းအဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန် (p = 0.441, F ကို = 0.986) dF = 6) ။ DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုခါးဆစ်၏ nonlinear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသိသိသာသာနိမ့် DAMGO EC ဖော်ပြခဲ့တယ်50 ကြွက်များပေါ်တွင် osFosB (101 ± 11 nM) ရှိတန်ဖိုးများကို offFosB နှင့် comparedFosB နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (510 ± 182 nM, p <0.05 ကျောင်းသား၏ t-test ဖြင့်) ။ သို့သော် DAMGO အီးတွင်သိသာသောကွာခြားချက်မရှိပါmax ကို တန်ဖိုးများ (20.9 နှိုင်းယှဉ် 1.26 ± 19.8% အသီးသီးကြွက်အပေါ်နဲ့ off p = 1.27 ΔFosBအတွက် 0.534% တားစီး±) ။
အဆိုပါ NAc အတွက် adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ΔFosB-ဖော်ပြ (ΔFosBအပေါ်) သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု (ΔFosBချွတ်) 1 μM၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်နည်းလမ်းများထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းကြွက် assayed ခဲ့ကြသည်ထံမှအမြှေးပါး ...
KOR-mediated adenylyl cyclase တားစီးကိုလည်း (ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်တစ်ခု function ကိုအဖြစ်ကွဲပြားပုံ 2B) ။ U50,488 အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏ Two- လမ်း ANOVA ΔFosB status ကို (p = 0.0006, F = 14.53, df = 1) နှင့် U50,488 အာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F = 26.48, df = 3) ၏သိသာထင်ရှားသောအဓိကသက်ရောက်မှုပြသခဲ့သည် အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာအပြန်အလှန် (p = 0.833, F ကို = 0.289, df = 3) နှင့်အတူ။ အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုခါးဆစ်၏ nonlinear ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပိုကြီးတဲ့ U50,488 E ကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်max ကို U18.3, 1.14 EC နှင့်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်မရှိဘဲကြွက်များပေါ်တွင် osFosB (12.5 ± 2.03% တားစီး) mFosB နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက (0.05 ± 50,488% တားစီး; p <XNUMX StudentFosB နှင့်ကျောင်းသား၏ t-test ကနေကွဲပြားခြားနားသော), တန်ဖိုး။50 (ကြွက်အပေါ်နဲ့ off ΔFosBအတွက် 310 ± 172 nm နှိုင်းယှဉ် 225 ± 48 nm အသီးသီး, p = 0.324) တန်ဖိုးများ။
Mor နှင့် KOR နှင့်အတူလေ့လာတွေ့ရှိသက်ရောက်မှုမတူဘဲခုနှစ်, cannabinoid agonist WIN55212-2 (ဖွငျ့ adenylyl cyclase ၏တားစီးပေါ်သွေးဆောင် Transgene ΔFosBထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုရှိခဲ့သည်ပုံ 2C) ။ WIN55,212-2 အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုအချက်အလက်များ၏ Two- way ANOVA မူးယစ်ဆေးဝါးအာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F = 23.6, df = 2) ၏သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသပေမယ့်ΔFosBအဆင့်အတန်း (p = 0.735, F = 0.118, df) = 1) မဟုတ်သလိုသိသိသာသာအပြန်အလှန်ရှိခဲ့သည် (p = 0.714, F ကို = 0.343, df = 2) ။ ထို့အပြင် osFosB ၏သက်ရောက်မှုသည်မည်သည့် agonist မှမရှိခြင်းသည် Basal သို့မဟုတ် forskolin-stimulated adenylyl cyclase လုပ်ဆောင်မှုအပေါ်သက်ရောက်မှုမရှိပါ။ Basal adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုသည် mFosB တွင်ကြွက်များပေါ်ရှိ 491FosB တွင် 35 ± 546 pmol / mg / min ဖြစ်သည်။ osFosB ကြွက်များမှ 44FosB တွင် ၅၄၆ - ၄၄ (ကျောင်းသား၏စမ်းသပ်မှုအရ p = 0.346) ။ အလားတူစွာ 1 µM forskolin ၏ရှေ့တော်၌ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုကြွက်တွေအပေါ် 2244FosB အတွက် 163 ± 2372 pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ်ရှိခဲ့သည်ကြွက်တွေကိုချွတ် osFosB (p = 138) တွင် 0.555 ± XNUMX pmol / mg / min ရှိခဲ့သည်။
3.3 ။ adenylyl cyclase ၏ opioid နှင့် cannabinoid အဲဒီ receptor-mediated တားစီးပေါ်ΔcJun၏အကျိုးသက်ရောက်မှု
ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ် NAc အတွက် adenylyl cyclase မှ Mor နှင့် KOR ထံမှ inhibitory signal ကို transduction တိုးမြှင်သောကြောင့်, ကΔFosB-mediated ကူးယူတစ်ဦးကြီးစိုးကအနုတ် inhibitor တခုဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံ၌ opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြ modulate မယ်လို့ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်အကျိုးစီးပွားဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤမေးခွန်းကိုဖြေရှင်းရန်, DAMGO နှင့် U50,488 အားဖြင့် forskolin-နှိုးဆွ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးတွေနဲ့ΔcJunဖော်ပြ bitransgenic ကြွက်များ၏ NAc ကနေကိုပြင်ဆင်အမြှေးပါးအတွင်းလေ့လာခဲ့သည်။ ရလဒ် Mor သို့မဟုတ် KOR (ဖွငျ့ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးပေါ်ΔcJunထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသိသာထင်ရှားသောသက်ရောက်မှုပြသပုံ 3) ။ DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု - အကျိုးသက်ရောက်မှုခါးဆစ်၏ Two- လမ်း ANOVA DAMGO အာရုံစူးစိုက်မှု (p <0.0001, F = 20.26, df = 6) ၏သိသိသာသာအဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသပေမယ့်ΔcJun status ကို (p = 0.840, F = 0.041, df = 1) အဘယ်သူမျှမသိသာအပြန်အလှန် (p = 0.982, F ကို = 0.176, df = 6) ရှိခဲ့သည်။ အလားတူပင်အီး၌အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်max ကို သို့မဟုတ် EC50 (အီးအပေါ်ΔcJunနှင့်အတူကြွက်တွေအကြားတန်ဖိုးများmax ကို = 23.6 ± 2.6%; EC50 = 304 အီး (43 nm) သို့မဟုတ်ΔcJunချွတ်±max ကို = 26.1 ± 2.5%, p = 0.508; EC50 = 611 ± 176 nm, p = 0.129) ။ U50,488 နှင့်အလားတူရလာဒ်များကိုတွေ့ရသည်။ ထိုကဲ့သို့သောအရာ ၀ င်မှု - အကျိုးသက်ရောက်သည့်ခါးဆစ်နှစ်ခု၏ ANOVA သည်သိသာထင်ရှားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည် (p <0.0001, F = 11.94, df = 6), notcJun status (p = 0.127) , F = 2.391, df = 1) နှင့်မျှမတို့သိသာအပြန်အလှန် (p = 0.978, F ကို = 0.190, df = 6) ရှိ၏။ အလားတူပင်အီး၌အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်max ကို သို့မဟုတ် EC50 (အီးအပေါ်ΔcJunနှင့်အတူကြွက်တွေအကြားတန်ဖိုးများmax ကို = 14.8 ± 2.9%; EC50 = 211 အီး 81 nm ±) သို့မဟုတ်ချွတ် (max ကို = 16.7 ± 1.8%, p = 0.597; EC50 = 360 ± 151 nm, p = 0.411) ။
အဆိုပါ NAc အတွက် adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု၏တားစီးပေါ်ΔcJunစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု။ ΔcJun-ဖော်ပြ (ΔcJunအပေါ်) သို့မဟုတ်ထိန်းချုပ်မှု (ΔcJunချွတ်) ကြွက် DAMGO (က), U50,488H (ခ) သို့မဟုတ် WIN55,212-2 ၏ရှေ့မှောက်တွင်နွေးထွေးစွာရှိနေပြီးခဲ့ကြသည်ထံမှအမြှေးပါး ...
JcJun စကားရပ်သည် cannabinoid agonist အားဖြင့် NAc တွင် adenylyl cyclase ၏တားစီးမှုကိုသိသိသာသာမထိခိုက်စေပါ။ WIN55,212-2 concentrationeffect curves များအပြန်အလှန် ANOVA သည် WIN55,212-2 အာရုံစူးစိုက်မှု၏အဓိကအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသသည် (p <0.0001, F = 15.53, df = 6), ဒါပေမယ့် genotype (p = 0.066, F = 3.472, df = 1) နှင့်မျှသိသာအပြန်အလှန် (p = 0.973, F ကို = 0.208, df = 6) ရှိခဲ့သည်။ အလားတူပင် WIN55,212-2 E တွင်လည်းသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်max ကို တန်ဖိုးများ (13.0 ± 2.3% နဲ့ off ကြွက်သာရှိပြီးပြည်ပမှအပေါ်ΔcJunအတွက် 13.6 ± 0.9% တားစီးအသီးသီး, p = 0.821) နှင့်သို့မဟုတ် EC50 (ပယ်ကြွက်သာရှိပြီးပြည်ပမှအပေါ်ΔcJunအတွက် 208 ± 120 nm နှင့် 417 ± 130 nm အသီးသီး, p = 0.270) တန်ဖိုးများ။ ΔcJunဖော်ပြကြွက်တွေမှာ WIN55,212-2 ၏လျော့နည်းသွားအာနိသင်ဆီသို့အနည်းငယ်လမ်းကြောင်းသစ်ရှိခဲ့ပေမယ့်ထို့ကြောင့်ယင်း Transgene သိသိသာသာ adenylyl cyclase ၏ cannabinoid တားစီးပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ ထိုမှတပါး, Basal သို့မဟုတ် forskolin-နှိုးဆွ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုအပေါ်ΔcJun status ကိုအဘယ်သူမျှမသက်ရောက်ရှိ၏။ Basal adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုအသီးသီးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချွတ်ΔcJunနှင့်အတူကြွက်တွေမှာ 1095 ± 71 pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ်နှင့် 1007 ± 77 pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ် (p = 0.403) ဖြစ်ခဲ့သည်။ 1 μM forskolin ခြင်းဖြင့်နှိုးဆွ Adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှုအသီးသီးပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ချွတ်ΔcJunနှင့်အတူကြွက်တွေမှာ 4185 ± 293 pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ် (p = 4032) သာရှိပြီးပြည်ပမှ 273 ± 0.706 pmol / မီလီဂရမ် / မိနစ်ဖြစ်ခဲ့သည်။
3.4 ။ ဆွေးနွေးချက်
ဤလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို / D ကို dynorphin အတွက်ΔFosB၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်များ၏ NAc အတွက် adenylyl cyclase ၏တိုးမြှင် Mor-mediated, G-ပရိုတိန်း activation နှင့်တားစီးထင်ရှား1အာရုံခံ် R ကို။ adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု KOR-mediated တားစီးကိုလည်းΔFosBအဆိုပါ NAc အတွက် endogenous opioid စနစ်ကထိန်းညှိကြောင်းအကြံပြု, ကြွက်ဖော်ပြΔFosB၏ NAc အတွက်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ DAMGO E ကိုmax ကို Mor-နှိုးဆွဘို့အတန်ဖိုးကို [ သာ. ကြီးမြတ်ကြီး35S က] GTPγS binding, နှင့်၎င်း၏ EC50 တန်ဖိုးအားထိန်းချုပ်မှုကိုကြွက်နှိုင်းယှဉ် adenylyl cyclase တားစီးဘို့, ΔFosBအတွက် Over-ဖော်ပြကြွက်နိမ့်ခဲ့သည်။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်ဆန်းစစ်သည့် assay အခြေအနေများအောက်တွင် effector မော်ဂျူသော်လည်းမမှာ G-ပရိုတိန်း activation များအတွက်အဲဒီ receptor အရံများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေအကြံပြုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ KOR agonist အားဖြင့် adenylyl cyclase ၏လုပျသငျတားစီးΔFosBစကားရပ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကွောငျးအဆိုပါတွေ့ရှိချက် mouse ကိုဦးနှောက်အတွက် KOR binding က်ဘ်ဆိုက်များ၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်ကိုက်ညီသည် KOR-mediated တုံ့ပြန်မှုကိုအနိမ့်အဲဒီ receptor အရံအကြံပြု (Unterwald, et al ။ , 1991) ။ ဆနျ့ကငျြ, CB1R ကို-mediated, G-ပရိုတိန်းလှုပ်ရှားမှုနဲ့ adenylyl cyclase ၏တားစီးΔFosBစကားရပ်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြ, အဆိုပါ opioid နှင့် cannabinoid စနစ်များသည်ဤ NAc အာရုံခံအတွက်ΔFosBသူတို့ရဲ့တုန့်ပြန်ကွာခြားကြောင်းအကြံပြု။
opioid အဲဒီ receptor-mediated အချက်ပြအပေါ်ΔFosBများ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ striatum အတွက်ΔFosBစကားရပ်မော်ဖင်းအကိုက်စူးရှခြင်းနှင့်နာတာရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများအဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားသောငါတို့ယခင်အစီရင်ခံစာ (နဲ့အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Zachary, et al ။ , 2006) ။ ကြောင်းလေ့လာမှုတစ်ခုမှာတွေ့ရှိချက် / D ကို dynorphin အတွက်ΔFosB၏ Transgene စကားရပ်နဲ့ကြွက်ခဲ့သည်1R ကို striatal အာရုံခံထိန်းချုပ်မှုထက်အရပ်ဌာနအေးစက်အတွက်မော်ဖင်းအကိုက်ဖို့ပိုအထိခိုက်မခံခဲ့ကြသည်။ ထို့အပွငျ, ဒီအကျိုးသက်ရောက်မှုဟာ NAc သို့ site ကို-တိကျတဲ့ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်ΔFosB၏ viral ကမကထပြုခဲ့စကားရပ်အားဖြင့် mimicked ခဲ့သည်။ ယင်းတွေ့ရှိချက်ဟာ NAc အတွက် Mor အချက်ပြတိုးမြှင့်ပြသသောလက်ရှိရလဒ်တွေကိုအတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ယခင်ကဗီဇ encoding ကဖော်ထုတ် ΔFosBတစ်ပစ်မှတ်အဖြစ် dynorphin နှင့်လျှော့ချ dynorphin ΔFosB bitransgenic ကြွက်တွေမှာမော်ဖင်းအကိုက်တိုးမြှင်ကြိုးဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဆိုပြု (Zachary, et al ။ , 2006) ။ ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များ NAc အတွက် adenylyl cyclase ၏ KOR-mediated တားစီးလျော့ချ dynorphin အောက်ပါ KOR sensitivity ကိုတစ်ဦးအစားထိုးတိုးရောင်ပြန်ဟပ်စေခြင်းငှါ, သောကြွက်ဖော်ပြΔFosBအတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသပါ။ ယခင်လေ့လာမှုများ KOR NAc အပါအဝင် prodynorphin နောက်ကောက်ကြွက်အချို့ဦးနှောက်ဒေသများ, (အတွင်း upregulated ခဲ့ပြခဲ့ကြClarke, et al ။ , 2003).
ΔFosB, ΔcJun, အΔFosB binding မိတ်ဖက် cJun များ၏ကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာခြင်းကို Mutant ၏သွေးဆောင် Transgene စကားရပ်မတူဘဲ, Mor သို့မဟုတ် KOR agonists အားဖြင့် adenylyl cyclase တားစီးပြောင်းလဲပစ်ခဲ့ပါဘူး။ ဤရလဒ်သည်အတော်လေးနိမ့်သောΔFosBထုတ်ဖော် Basal အဆင့်ဆင့်သည်, NAc အတွက် signal ကို transduction ၏ဤအဆင့်မှာ opioid အဲဒီ receptor အချက်ပြထိန်းသိမ်းခြင်းအတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍမှမအကြံပေးချင်ပါတယ်။ မော်ဖင်းအကိုက်၏အေးစက်ကြိုးသက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်လေ့လာမှု (ထဲမှာΔcJunစကားရပ်အားဖြင့်ယုတ်လျော့ခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုZachary, et al ။ , 2006) ကအေးစက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစဉ်အတွင်းΔFosB၏မော်ဖင်းအကိုက်သော induction ဖြစ်စေမူးယစ်ဆေးဝါးမှအမူအကျင့်တုံ့ပြန်မှုကိုထိန်းညှိအတွက်အရေးကြီးသည်သို့မဟုတ် opioid receptors အားဖြင့် Proximity အချက်ပြထိခိုက်သူတွေကိုထက်အခြားΔFosB၏မှတ်တမ်းသက်ရောက်မှု opioid ဆုလာဘ်ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးစေခြင်းငှါအကြံပြုထားသည်။ မည်သည့်ဖြစ်ရပ်မှာလက်ရှိလေ့လာမှုရလဒ်တွေကိုရှင်းလင်းစွာကြောင်းပြ ΔFosBစကားရပ် striatal dynorphin အတွက် Basal အဆင့်ဆင့်အထက်သို့ခြီးမွှောကျသောအခါ / D ကို1R-ဖော်ပြအာရုံခံခြင်း, NAc အတွက် adenylyl cyclase ၏တားစီးဖို့ Mor နှင့် KOR ၏နားချင်းဆက်မှီအတွက်ခိုင်မာတဲ့တိုးလည်းမရှိ။
MOR- နှင့် KOR-mediated အချက်ပြΔFosB overexpression နေဖြင့်တိုးမြှင့်ထားတဲ့အားဖြင့်ယန္တယားမသိရသေးသော်လည်း, ကျွန်တော်အရင်က [ခြင်းဖြင့်အကဲဖြတ်သော Mor အဆင့်ဆင့်ကိုပြသကြ3H ကို] naloxone binding, (နှိုင်းယှဉ်ပယ်ကြွက်အပေါ်ΔFosB၏ NAc အတွက်ကွဲပြားခြားနားနေကြသည်မဟုတ်Zachary, et al ။ , 2006) ။ တူညီသောလေ့လာမှုကြောင်းGαတွေ့ရှိခဲ့i1 နှင့်2ပရိုတိန်းပါဝင်မှုနှုန်းΔFosBစကားရပ်အားဖြင့်ဤဒေသတွင်ထိခိုက်မခံခဲ့ရပါ။ သို့သော်ယခင်ဗီဇစကားရပ်ခင်းကျင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်Gαပြသo mRNA (ကြွက်အပေါ်ΔFosB၏ NAc အတွက် upregulated ခဲ့သည်McClung နှင့် Nestler, 2003) ။ ဒါဟာပြည့်ပြည့်စုံစုံပရိုတိန်းအဆင့်မှာအဖြစ်အများအပြားမှာ G-ပရိုတိန်း modulatory ပရိုတိန်း၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအပျေါမှာ G-ပရိုတိန်း subunit စကားရပ်အပေါ် Transgene ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုဆန်းစစ်ဖို့အနာဂတ်လေ့လာမှုများအတွက်အကျိုးစီးပွားဖြစ်လိမ့်မည်။
ΔFosBစကားရပ်သမဝါယမမြှင့်တင်ရန်မစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်1အဆိုပါ NAc အတွက် R ကို-mediated အချက်ပြ။ သမဝါယမမြားတှငျပွောငျးလဲကြောင့်ဖြစ်နိုင်သောကြောင့်1R ကိုအချက်ပြတပြင်လုံးကို NAc ပြင်ဆင်မှုအတွက်ယုတ်လျော့ကြောင်းအာရုံခံတဲ့ discrete လူဦးရေအတွက်ပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ Δ၏ဥပမာအားဖြင့်, အုပ်ချုပ်ရေး9- THC သည် NAc ၏အဓိကအားဖြင့် osFosB ကိုသိသိသာသာသွေးဆောင်သော်လည်း၊Perrotti, et al ။ , 2008) ။ ငါndeed ကြောင့်Δနဲ့စိန်ခေါ်မှုပြသထားသည်9Δ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေးအောက်ပါ -THC9-THC အဆိုပါ NAc core ကိုအတွက် dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးလာပေမယ့် shell ကိုအတွက်ဖြန့်ချိလျော့နည်းသွား (Cadoni, et al ။ , 2008) ။ ဒါဟာ / D ကို bitransgenic ကြွက်များ၏ 11A လိုင်းသာ dynorphin အတွက်ΔFosBဖော်ပြသတိပြုပါရန်လည်းအရေးကြီးပါသည်1အဆိုပါ striatum ၏အပြုသဘောဆောင်အလတ်စား spiny အာရုံခံ R, ဒါပေမယ့်သမဝါယမ1R ကို / D ကိုနှစ်ဦးစလုံး dynorphin အတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုနေကြပါတယ်1R ကိုနှင့် enkephalin / D ကို2R ကိုအပြုသဘော striatal အာရုံခံ (Hohmann နှင့် Herkenham, 2000), အဖြစ် cortical afferents ၏ဆိပ်ကမ်းအပေါ် (က Rob, et al ။ , 2001) ။ ΔcJun inducibly နှစ်ဦးစလုံး D ကိုအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်ပေမယ့်ΔFosB-mediated ကူးယူများ၏ကြီးစိုးအနုတ်လက္ခဏာထိန်းညှိ၏ expression, ΔcJunလည်း, cannabinoid အဲဒီ receptor အချက်ပြကိုမသိသိသာသာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့1 နဲ့ D2ဤအကြွက်တွေမှာအလတ်စား spiny အာရုံခံ၏ -containing လူဦးရေ (Peakman, et al ။ , 2003) ။ ဒါဟာ Mor နှင့် KOR နှင့်အတူရလဒ်များကိုနေဖြင့်အကြံပြုအဖြစ် Basal ΔFosBစကားရပ်, ΔcJunအဲဒီ receptor အချက်ပြမထိခိုက်မယ်လို့လုံလုံလောက်လောက်အနိမ့်ကြောင်း, သို့သော်, ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသမဝါယမကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်1R ကိုအချက်ပြကြိုးနှံစှာ Basal ΔFosBစကားရပ်အားဖြင့်တိုးမြှင့်သည်နောက်ထပ်ΔFosBစကားရပ်တိုးပွားလာသို့မဟုတ်ΔcJunနှင့်အတူ၎င်း၏လုပ်ရပ်များအားပိတ်ဆို့ခြင်းကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောစာရင်းအင်းအရေးပါမှုအဆင့်မရောက်နိုင်ဘူးသာအနည်းငယ်သက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီအနက်များအတွက်သွယ်ဝိုက်ထောက်ခံမှု WIN55,212-2 EC နှိုင်းယှဉ်ခြင်းဖြင့်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်50 ΔFosBနှိုင်းယှဉ်ΔcJunဖော်ပြကြွက်အကြားတန်ဖိုးများ။ အဆိုပါ WIN55,212-2 EC များ၏အချိုး50 ယင်း၏ EC အဖို့ΔcJun၏သွေးဆောင်စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်တွေမှာ adenylyl cyclase တားစီးဘို့တန်ဖိုးကို50 Transgene ဖြစ်စေ၏ induction မပါဘဲကြွက်များတွင်တူညီသောအချိုးအစား 4.0 ခဲ့သော်လည်းΔFosB၏သွေးဆောင်စကားရပ်နှင့်အတူကြွက်တွေမှာ, G-ပရိုတိန်း activation များအတွက်တန်ဖိုး 1.2 ဖြစ်ခဲ့သည်။
တနည်းအား cannabinoids သမဝါယမအပေါ်မဆိုတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဘဲΔFosBစကားရပ်သွေးဆောင်ခြင်းငှါ,1R ကိုအချက်ပြ။ ဒီဇာတ်လမ်းမှာတော့ cannabinoids ΔFosB-mediated မှတ်တမ်းစည်းမျဉ်းကနေတစ်ဆင့်အခြားမူးယစ်ဆေးဝါးများ၏ psychoactive သက်ရောက်မှုမှတုန့်ပြန် modulate နိုင်ဘူး။ ငါဎတကယ်တော့, Δ၏အုပ်ချုပ်ရေး9-THC (opioids နှင့်စိတ်ကြွဆေးမှလက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ထုတ်လုပ်Cadoni, et al ။ , 2001, Lamarque, et al ။ , 2001), ဒီအယူအဆနှင့်ကိုက်ညီ။ ထို့အပြင် cannabinoid agonist CP55,940 ၏ထပ်ခါတလဲလဲအုပ်ချုပ်ရေး (inducibly ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာΔFosBဖော်ပြအလားတူကြွက်ငှါ, NAc အတွက် Mor-mediated, G-ပရိုတိန်း activation တိုးမြှင့်ဖို့အစီရင်ခံခဲ့သည်Vigano, et al ။ , 2005) ။ Δအပေါ်ΔFosBစကားရပ်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု9-THC-mediated အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ, ဒါပေမယ့်ပစ္စုပ္ပန်ရလဒ်များကိုတစ်ဦးအပြန်အလှန်ထပ်မံလုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ အဆိုပါဒီရလဒ်တွေကိုနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ယခင်လေ့လာမှု (Zachary, et al ။ , 2006) Mor နှင့် KOR အဆိုပါ striatum အတွက် / dynorphin အတွက်ΔFosB-သွေးဆောင်ပြောင်းလဲပြသပါ။ Δ၏အကြိုးသက်ရောက်မှု9KOR ၏ deletion 'Δ attenuated သော်လည်း -THC, နေရာ preference ကိုဖြင့်တိုင်းတာသည်အတိုင်း, Mor တရားမဝင်သောကြွက်တွေအတွက်ဖျက်သိမ်းနေကြ9-THC ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်နှင့်Δထင်ရှား9-THC ရာအရပျ preference ကို (Ghozland, et al ။ , 2002) ။ အလားတူပင်Δဖို့ရာအရပျခြင်းကိုမနှစ်သက်အေးစက်9-THC (ရိုင်း-type အမျိုးအစားကြွက်နှိုင်းယှဉ်လိုလားသူ dynorphin နောက်ကောက်အတွက်ပျက်ကွက်ဖြစ်ပါသည်Zimmer, et al ။ , 2001) ။ ဤရွေ့ကားဒေတာΔကြောင်းအကြံပြု9-THC ΔFosBသော induction နှင့် dynorphin စကားရပ်ထဲမှာလျှော့ချနှင့်အတူအချက်ပြ Mor ၏နောက်ဆက်တွဲသော induction ပြီးနောက်ပိုပြီးအကျိုးဖြစ်ထွန်းပါလိမ့်မယ်။
summarization အတွက်y က, ဒီလေ့လာမှု၏ရလဒ်များကို: D အတွက်ΔFosB၏စကားရပ်ပြသ1R ကို / dynorphin အပြုသဘော striatal အာရုံခံအဆိုပါ NAc အတွက် adenylyl cyclase လှုပ်ရှားမှု, G-ပရိုတိန်းကမကထပြုခဲ့တားစီး၏အဆင့်မှာ MOR- နှင့် KOR-mediated အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်။ ဤသည်တွေ့ရှိချက်ဆုလာဘ်အတွက် endogenous opioid စနစ်တစ်အခန်းကဏ္ဍ (သရုပ်ပြပြီလေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်တယ်Trigo, et al ။ , 2010), နှင့်ဆုလာဘ်အပေါ်ΔFosB-mediated သက်ရောက်မှုများအတွက်အလားအလာယန္တရားသည်။ ဆနျ့ကငျြ, CB1နောက်ထပ်လေ့လာမှု endocannabinoid system ပေါ်တွင်ΔFosBသော induction ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုဆုံးဖြတ်ရန်မျက်ခြေမပြတ်နေကြသည်သော်လည်း NAc အတွက် R ကို-mediated အချက်ပြသိသိသာသာ, ဆန်းစစ်အခြေအနေအောက်မှာ striatal ΔFosBစကားရပ်အားဖြင့်မထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
Mor အချက်ပြΔFosBဖော်ပြကြောင်းကြွက်၏နျူကလိယ accumbens အတွက်တိုးမြှင့်နေသည်
adenylyl cyclase ၏ KOR တားစီးကိုလည်းΔFosBဖော်ပြကြွက်များတွင်တိုးမြှင့်နေသည်
ΔFosB၏ expression သမဝါယမပြောင်းလဲပစ်မထားဘူး1နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် R ကိုအချက်ပြ
စာရေးသူဟာ [အတူနည်းပညာဆိုင်ရာအကူအညီအတွက် Hengjun သူ, ဂျော်ဒန်ကော့နှင့်အာရုန်ကို Tomarchio ကျေးဇူးတင်ပါတယ်35S က] binding assay GTPγS။ ဒီလေ့လာမှုက USPHS ထောက်ပံ့ရေး DA014277 (LJS), DA10770 (DES ဟာ) နှင့် P01 DA08227 (EJN) ကထောက်ခံခဲ့သည်။
Bozarth MA, ပညာရှိ RA ။ ခန္ဓာဗေဒကွဲပြား opiate အဲဒီ receptor လယ်ကွင်းဆုလာဘ်များနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှီခိုဖျန်ဖြေ။ သိပ္ပံ။ 1984;224: 516-517 ။ [PubMed]
ဘရက်ဖို့ဒ MM ။ ပရိုတိန်း-ဆိုးဆေးအသုံးပြုစည်းနှောင်၏နိယာမအသုံးချဖို့ပရိုတိန်း၏မိုက်ခရိုဂရမ်ပမာဏ၏အရေအတွက်များအတွက်တစ်ဦးကလျင်မြန်စွာနဲ့အထိခိုက်မခံတဲ့နည်းလမ်းကို။ စအို။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ 1976;72: 248-254 ။ [PubMed]
Breivogel CS, Childers SR, Deadwyler လုပ် SA, Hampson RE, Vogt LJ, Sim-Selley LJ ။ နာတာရှည်မြစ်ဝကျွန်းပေါ်9-tetrahydrocannabinol ကုသမှုဦးနှောက်ထဲမှာ cannabinoid အဲဒီ receptor-activated, G-ပရိုတိန်း၏အချိန်-မှီခိုအရှုံးထုတ်လုပ်သည်။ ဂျေ Neurochem ။ 1999;73: 2447-2459 ။ [PubMed]
Breivogel CS, Selley DE, Childers SR ။ လှုံ့ဆော်ဖို့အတှကျ Cannabinoid အဲဒီ receptor agonist ထိရောက်မှု [35cerebellar အမြှေးပါးကြွက်မှ binding က S] GTPγSဂျီဒီပီဆှဖှေဲ့အတွက် agonist-သွေးဆောင်လျှောက်လျော့နည်းနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ဂျေ Biol ။ Chem ။ 1998;273: 16865-16873 ။ [PubMed]
Cadoni ကို C, Pisanu တစ်ဦးက, Solinas M က, Acquas အီး, Di Chiara G. အမူအကျင့်ာင်းမော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူမြစ်ဝကျွန်းပေါ် 9-tetrahydrocannabinol နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့ပြီးနောက်။ Psychopharmacology (Berl) 2001;158: 259-266 ။ [PubMed]
Cadoni ကို C, Valentini V ကို, Di Chiara G. အမူအကျင့်ာင်းမော်ဖင်းအကိုက်နှင့်အတူမြစ်ဝကျွန်းပေါ် 9-tetrahydrocannabinol နှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်-sensitive မှ: accumbal shell ကိုအတွက် differential ကိုအပြောင်းအလဲများနှင့်အဓိက dopamine ဂီယာ။ ဂျေ Neurochem ။ 2008;106: 1586-1593 ။ [PubMed]
Chen က J ကို, Kelz ကို MB, Zeng, G, Sakai က N ကို, Steffen ကို C, Shockett PE, Picciotto MR, Duman RS, Nestler EJ ။ ဦးနှောက်ထဲမှာသွေးဆောင်, ပစ်မှတ်ထားဗီဇစကားရပ်နှင့်အတူ Transgene တိရိစ္ဆာန်များ။ Mol ။ Pharmacol ။ 1998;54: 495-503 ။ [PubMed]
Childers SR ။ Opioid အဲဒီ receptor-coupled ဒုတိယတမန်တို့ကို။ ဘဝကသိပ္ပံ။ 1991;48: 1991-2003 ။ [PubMed]
Childers SR, Fleming က L ကို, Konkoy ကို C, Marckel: D, Pacheco M က, Sexton T က, ရပ်ကွက်အက်စ် Opioid နှင့်ဦးနှောက်အတွက် adenylyl cyclase ၏ cannabinoid အဲဒီ receptor တားစီး။ အမ်း။ နယူးယော့ Acad ။ သိပ္ပံ။ 1992;654: 33-51 ။ [PubMed]
Childers SR, Xiao R ကို, Vogt LJ, Sim-Selley LJ ။ ၏ Kappa opioid အဲဒီ receptor ဆွ [35guinea ဝက်ဦးနှောက်အတွက် binding က S] GTPγS: Kappa အဘို့သက်သေအထောက်အထားမရှိခြင်း2G-ပရိုတိန်း၏ -selective activation ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ Pharmacol ။ 1998;56: 113-120 ။ [PubMed]
Clarke က S, Zimmer တစ်ဦးက, Zimmer လေး, Hill က RG, မီးဖိုချောင်ဗြဲဒေသကြီး micro- ၏ရွေးချယ်တက်-စည်းမျဉ်း, delta- နှင့် Kappa-opioid receptors သော်လည်းမ enkephalin နှင့် dynorphin နောက်ကောက်ကြွက်၏ဦးနှောက်အတွက် opioid အဲဒီ receptor-တူသော 1 receptors ။ neuroscience ။ 2003;122: 479-489 ။ [PubMed]
Colby CR, Whisler K ကို Steffen ကို C, Nestler EJ, ကိုယ်ပိုင် DW ။ DeltaFosB ၏ Striatal ဆဲလ်အမျိုးအစား-တိကျတဲ့ overexpression ကင်းဘို့မက်လုံးပေးပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ neuroscience ။ 2003;23: 2488-2493 ။ [PubMed]
Gardner EL ။ Endocannabinoid အချက်ပြစနစ်နှင့်ဦးနှောက်ဆုလာဘ်: dopamine အပေါ်အလေးပေး။ Pharmacol ။ ထဲကဓာတုပစ်စညျး။ ပြုမူနေ။ 2005;81: 263-284 ။ [PubMed]
Ghozland S က, Matthes HW, Simonin က F, Filliol: D, Kieffer BL, cannabinoids ၏ Maldonado R. လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှု mu-opioid နှင့် Kappa-opioid receptors ကကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ ဂျေ neuroscience ။ 2002;22: 1146-1154 ။ [PubMed]
Herkenham M က, Lynn AB, ဂျွန်ဆင် MR, Melvin LS, က de ကော့စ BR, ဆန် KC ။ ကြွက်ဦးနှောက်ထဲမှာ cannabinoid receptors ၏စရိုက်လက္ခဏာတွေနှင့်ဒေသခံ: တစ်အရေအတွက်ထဲမှာစသည်တို့ autoradiographic လေ့လာမှု။ ဂျေ neuroscience ။ 1991;11: 563-583 ။ [PubMed]
ကြွက် striatum ၏အာရုံခံ subpopulations အတွက် Hohmann AG က, cannabinoid သမဝါယမ၏ Herkenham အမ် Localization (1) အဲဒီ receptor mRNA: တစ်ကို double-တံဆိပ် situ Hybrid လေ့လာမှုမှာ။ synapses ။ 2000;37: 71-80 ။ [PubMed]
Howlett AC အ, Barth က F, Bonner TI, Cabral, G, Casellas P ကို, Devane WA, Felder CC ကို, Herkenham M က, Mackie K ကိုမာတင် BR, Mechoulam R ကို, Pertwee RG ။ ဆေးဝါးဗေဒ၏နိုင်ငံတကာယူနီယံ။ XXVII ။ cannabinoid receptors ၏ခွဲခြား။ Pharmacological ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ 2002;54: 161-202 ။
Huestis MA, Gorelick DA, Heishman SJ, Preston KL, နယ်လ်ဆင် RA, Moolchan ET, ဖရန့် RA ။ အဆိုပါ CB1-ရွေးချယ် cannabinoid အဲဒီ receptor ရန် SR141716 အားဖြင့်သောက်သည်ဆေးခြောက်သက်ရောက်မှုများပိတ်ဆို့ထားခြင်း။ Arch ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2001;58: 322-328 ။ [PubMed]
Koob gf, Volkow ND ။ စွဲလမ်း၏ Neurocircuitry ။ Neuropsychopharmacology ။ 2010;35: 217-238 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Lamarque S က, Taghzouti K ကိုစိတ်ကြွဆေးများနှင့်ဘိန်းဖြူဖို့ locomotor တုံ့ပြန်မှုပိုကောင်းစေပါတယ် -tetrahydrocannabinol မြစ်ဝကျွန်းပေါ် (9) နဲ့ရှိမုနျကိုအိပ်ချ်နာတာရှည်ကုသမှု။ မူးယစ်ဆေးစွဲမှအားနည်းချက်များအတွက်ဂယက်ရိုက်။ Neuropharmacology ။ 2001;41: 118-129 ။ [PubMed]
Maldonado R ကို, Valverde အိုမူးယစ်ဆေးစွဲအတွက် endocannabinoid စနစ်၏ Berrendero အက်ဖ်ပါဝင်ပတ်သက်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း neuroscience ။ 2006;29: 225-232 ။ [PubMed]
Mansour တစ်ဦးက, Fox က, CA, Thompson က RC, Akil H ကို, Watson ဟာ SJ ။ ကြွက် CNS အတွက် mu-Opioid အဲဒီ receptor mRNA စကားရပ်: mu-receptor binding မှနှိုင်းယှဉ်။ ဦးနှောက် Res ။ 1994;643: 245-265 ။ [PubMed]
Matthes HWD, Maldonado R ကို, Simonin က F, Valverde အိုနှေးကွေး S ကို, မီးဖိုချောင်, ငါ Befort K ကို Dierich တစ်ဦးက, LeMeur M က, အရုပ် P ကို, Tzavara အီး, Hanoune J ကို, Roques ကို BP, Kieffer BL ။ မော်ဖင်းအကိုက်-သွေးဆောင် analgesia ၏အရှုံး, အμ-opioid receptor မျိုးရိုးဗီဇချို့တဲ့ကြွက်တွေမှာအကျိုးသက်ရောက်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေဆုချ။ သဘာဝ။ 1996;383: 819-823 ။ [PubMed]
McClung, CA, Nestler EJ ။ CREB နှင့် DeltaFosB အားဖြင့်မျိုးရိုးဗီဇစကားရပ်များနှင့်ကင်းဆုလာဘ်၏စည်းမျဉ်း။ နတ်။ neuroscience ။ 2003;6: 1208-1215 ။ [PubMed]
McClung, CA, Ulery PG, Perrotti LI, Zachary V ကို, Berton အို Nestler EJ ။ DeltaFosB: ဦးနှောက်အတွက်ရေရှည်လိုက်လျောညီထွေများအတွက်မော်လီကျူး switch သည်။ ဦးနှောက် Res ။ Mol ။ ဦးနှောက် Res ။ 2004;132: 146-154 ။ [PubMed]
Muller DL, Unterwald EM ။ D1 dopamine receptors ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းမော်ဖင်းအကိုက်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်ကြွက် striatum အတွက် deltaFosB သော induction modulate ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 2005;314: 148-154 ။ [PubMed]
Nestler EJ ။ ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း။ စွဲလမ်း၏မှတ်တမ်းယန္တရားများ: DeltaFosB ၏အခန်းကဏ္ဍ။ ဖီလို။ ဖြတ်ကျော်။ R. Soc ။ Lond ။ ခ Biol ။ သိပ္ပံ။ 2008;363: 3245-3255 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]
Nestler EJ, Kelz ကို MB, Chen ကဂျေ DeltaFosB: ရေရှည်အာရုံကြောများနှင့်အမူအကျင့် plasticity တစ်ဦးမော်လီကျူးဖျန်ဖြေ။ ဦးနှောက် Res ။ 1999;835: 10-17 ။ [PubMed]
Nye သူ, မျှော်လင့်ခြင်း BT, Kelz ကို MB, Iadarola M က, Nestler EJ ။ အဆိုပါ striatum နှင့်နျူကလိယ accumbens အတွက်ကင်းသဖြင့်နာတာရှည် FOS-related ကိုပဲ induction ၏စည်းမျဉ်းများ Pharmacological လေ့လာမှုများ။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1995;275: 1671-1680 ။ [PubMed]
က Rob: D, Alonso, G, Duchamp က F, Bockaert J ကို, Manzoni OJ ။ မောက်နျူကလိယ accumbens ၏ glutamatergic synapses မှာပြည်တွင်းနှင့် cannabinoid receptors ၏လုပ်ဆောင်ချက်ယန္တရားများ။ ဂျေ neuroscience ။ 2001;21: 109-116 ။ [PubMed]
ဆော်လမွန် Y. Adenylate assay cyclase ။ Adv ။ သိသိဘေ့ Res ။ 1979;10: 35-55 ။ [PubMed]
Selley DE, Sim LJ, Xiao R ကို, လျူမေး, Childers SR ။ mu opioid အဲဒီ receptor-နှိုးဆွ [35ကြွက် thalamus နှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆဲလ်လိုင်းများအတွက် binding က S] GTPγS: agonist ထိရောက်မှုအခြေခံအချက်ပြ transduction ယန္တရားများ။ Mol ။ Pharmacol ။ 1997;51: 87-96 ။ [PubMed]
Trigo JM, မာတင်-Garcia ကအီး, Berrendero က F, Robledo P ကို, Maldonado R. အဆိုပါ endogenous opioid စနစ်က: မူးယစ်ဆေးစွဲနေတဲ့ဘုံအလွှာဟာ။ မူးယစ်ဆေးအရက်မူတည်တယ်။ 2010;108: 183-194 ။ [PubMed]
Unterwald EM, Knapp က C, Zukin သည် RS ။ ကြွက်နှင့် guinea ဝက်ဦးနှောက်ထဲမှာκ1နှင့်κ2 opioid receptors ၏ Neuroanatomical localization ။ ဦးနှောက် Res ။ 1991;562: 57-65 ။ [PubMed]
Vaccarino FJ, Bloom FE, Koob gf ။ နျူကလိယ၏ပိတ်ဆို့ကြွက်များတွင်သွေးကြောသွင်းဘိန်းဖြူဆုလာဘ် attenuates opiate receptors accumbens ။ Psychopharmacology (Berl) 1985;86: 37-42 ။ [PubMed]
Vigano: D, Rubino T က, Vaccani တစ်ဦးက, Bianchessi S က, Marmorato P ကို, Castiglioni ကို C, Parolaro ဃ Molecular cannabinoid နှင့် opioid စနစ်များအကြားအချိုးမညီအပြန်အလှန်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ယန္တရားများ။ Psychopharmacology (Berl) 2005;182: 527-536 ။ [PubMed]
Zachary V ကို, Bolanos, CA, Selley DE, Theobald: D, Cassidy အမတ်, Kelz ကို MB, Shaw-Lutchman T က, Berton အို Sim-Selley LJ, Dileone RJ, Kumar ကတစ်ဦး, Nestler EJ ။ မော်ဖင်းအကိုက်အရေးယူအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွက် DeltaFosB များအတွက်မရှိမဖြစ်အခန်းကဏ္ဍ။ နတ်။ neuroscience ။ 2006;9: 205-211 ။ [PubMed]
Zangen တစ်ဦးက, Solinas M က, Ikemoto S က, Goldberg က SR, ပညာရှိ RA ။ cannabinoid ဆုလာဘ်နှစ်ခုဦးနှောက်ဆိုဒ်များ။ ဂျေ neuroscience ။ 2006;26: 4901-4907 ။ [PubMed]
Zhu J ကို, Luo အဘိဓါန် Ly လီ JG, ချန်ကို C, လျူ-ချန် Ly ။ ligands ၏အာနိသင်နှင့်ထိရောက်မှု၏ဆုံးဖွတျခ: agonists အားဖြင့်ပုံတူမျိုးပွားလူ့ Kappa opioid အဲဒီ receptor ၏ activation [35S] GTPγSအမြှေးပါးမှ binding ပိုကောင်းစေပါတယ်။ ဂျေ Pharmacol ။ Exp ။ Ther ။ 1997;282: 676-684 ။ [PubMed]
Zimmer တစ်ဦးက, Valjent အီး, Konig M က, Zimmer လေး, Robledo P ကို, Hahn H ကို, Valverde အို dynorphin-လစ်လပ်ကြွက်တွေမှာမြစ်ဝကျွန်းပေါ် -9-tetrahydrocannabinol dysphoric သက်ရောက်မှု၏ Maldonado R. မရှိခြင်း။ ဂျေ neuroscience ။ 2001;21: 9499-9505 ။ [PubMed]
Zimmer တစ်ဦးက, Zimmer လေး, Hohmann AG က, Herkenham M က, Bonner TI ။ cannabinoid CB1 အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်များတွင်သေဆုံးမှု, hypoactivity နှင့် hypoalgesia တိုးတက်လာခဲ့သည်။ proc ။ Natl ။ Acad ။ သိပ္ပံ။ ယူအက်စ်အေ 1999;96: 5780-5785 ။ [PMC အခမဲ့ဆောင်းပါး] [PubMed]